Madaxweyne Faroole oo mar kale dhaliilay wax ka bedelka lagu sameeyey Dastuurka Federaalka ah. – Radio Daljir
Madaxweyne Faroole oo mar kale dhaliilay wax ka bedelka lagu sameeyey Dastuurka Federaalka ah.
Luulyo 5, 2013 2:02 b 0
Garoowe, 5, 2013- Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa shalayto mar uu ?hortagay mudanayaasha baarlamaanka Puntland, kaddib markii uu muddo dhawr todobaad ah ku maqnaa safar dalka dibeddiisa ah, dhowaana ay soo laabteen isaga iyo wafti uu hoggaaminayey.
Madaxweynaha ayaa wakiillada u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu uga xog-warramayey safarradii dalka dibeddiisa ahaa, meelihii ay tageen iyo waxyaabihii ugu soo qabsoomay, isagoo madaxweynuhu wax badan ka taabtay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, daanta ay ka taagan tahay Puntland xaaladda dawlad goboleedka Jubbaland, dastuurka Soomaaliya iyo wax ka baddelka la sheegay in lagu sameeyey iyo hannaanka axsaabeed ee Puntland iyo meesha uu marayo.
Madaxweynuhu, markii uu ka hadlayey dastuurka federaalka waxaa uu tilmaamay in aysan marna sharci ahayn wax ka? baddel aan la isla qaadan in dastuurka lagu sameeyo, aysanna ahayn waddo sax ah in wax lagu daro ama lagu reebo iyadoon ogalaansho iyo la tashi midna lagala samayn ummaddii ku heshiisay.
Khudbadda xog-warranka u badnayd ee maanta Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole uu u jeediyey baarlamaanka Puntland, waxaa kaloo uu uga hadlay geedi-socodka dimuqraadiyadda Puntland iyo hannaanka axsaabta badan ee looga hayaamayo qaabkii qabiiliga ahaa ee muddada lagu soo dhaqayey Puntland.
Mudane Faroole, waxaa uu sheegay habka axsaabtu in uu marayo meel wanaagsan, laguna socdo dhabbihii looga tallaabi lahaa qaabka qabaliga ku dhisan, waxaana Madaxweynuhu uu intaasi raaciyey ururada siyaasaddu si habsami leh in ay u wataan olalahoodii doorashooyinka golaha deegaanka.
Rabshaddii dhiiggu ku daatay ee ka dhacday Galkacyo, kana unkantay olole ururka Horseed uu ka samaynayey Galkacyo ayuu Madaxweynuhu soo hadal-qaaday, waxaana uu sheegay arrinkaasi koox qas-wadayaal ah in ay gaysteen, ayna weerareen ciidankii amniga sugayey, markaana ay timid dhimashada iyo dhaawaca labada dhinaca ah.
Xanuuno kala duwan iyo biyo la,aan baahsan oo ka jirta degmada Balidhidin ee Gobolka Bari.
Baahin: Khamiis 4 July -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle